काम,कमाइ र व्यापार को लागि २०७८ सबै भन्दा बढी कुन राशिलाई शुभ ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/काम,कमाइ र व्यापार को लागि २०७८ सबै भन्दा बढी कुन राशिलाई शुभ ?
यो वर्ष तपाईंको आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। पहिले लिइएको ऋण तिर्न सफल भइनेछ। आयको तुलनामा व्यय बढी हुनेछ सेयर बजारमा संलग्न मानिसले ध्यान दिनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा हार्डवेयरको व्यवसाय गर्ने मानिसको लागि यो वर्ष अत्यन्त शुभ साबित हुनेछ। प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। वर्षको अन्त्यतिर धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ।
कहिल्यै नसुत्नुहोस् यी ४ पोजीसनमा, पेटमा पर्न सक्छ असर